इमरान ताहिरले के भने त सन्दिप लामिछानेलाइ? - Hamro Nepal Cricket
इमरान ताहिरले के भने त सन्दिप लामिछानेलाइ?
राती भएको खेलमा सन्दीपले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । सन्दीपको यो उत्कृष्ट प्रर्दशनले विश्वका सवै क्रिकेटरलाई प्रभावित पार्यो । सबैले सन्दीपको खुलेर सनदीपको मुक्त कंठले प्रसंसा गरि रहेका छन् ।
त्यस्तै आईपीएलमा चेन्नईका लेग स्पिनर बलर इमरान ताहिर पनि सन्दीपको बलिङबाट प्रभावित भएर कुराकानी गरि रहेको तस्विर दिल्ली गएराती सार्वजनिक गरेको छ ।
सन्दिपको उत्कृष्ट प्रदर्शन
नेपाली युवा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो चार ओभर बलिङमा १ विकेट लिएर २१ रन खर्चिएका छन्। दिल्ली डेयर डेभिल्सबाट खेलिरहेका लामिछानेले महेन्द्रसिंह धोनीको टिम चेन्नेई सुपर किंग्सविरूद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ५.२५ इकोनोमीमा बलिङ गरेका हुन्।
यसअघि बैंग्लोरविरुद्ध डेब्यू खेलमा सन्दीपले ४ ओभरको स्पेलमा २५ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए। दोस्रो ओभरमै बलिङ गर्न आएका सन्दिपले आफ्नो पहिलो ओभरमा मात्र दुई रन खर्चिए। यस ओभरमा अस्ट्रेलियन शेन वाट्सनले सन्दीपका सबै बल खेले। दोस्रो बलमा २ रन लिनबाहेक उनले अन्य बलमा एक रन लिन सकेनन्। त्यसपछि आफ्नो दोस्रो ओभरमा सन्दिपले ६ रन खर्चिए।
सन्दीपले आफ्नो तेस्रो ओभरको पहिलो बलमा सुरेश रैनाको विकेट लिदैं ऐतिहासिक सफलता हात पारे। १५ रन बनाएर खेलिरहेका रैनालाई सन्दीपले विजय शंकरको हातबाट क्याच गराए। आइपीएलमा यो सन्दीपको दोस्रो खेलमा दोस्रो विकेट हो। यसअघि डेब्यू खेलमा सन्दीपले बैंग्लोरका पार्थिव पटेलको विकेट लिएका थिए।
१६३ रनको लक्ष्य पछ्याउदै चेन्नइ ब्याटिङ गरिरहेको छ। दिल्ली डेयरडेभिल्सले अन्तिम ओभरमा २६ रन बटुल्दै चेन्नइ सुपरकिंग्सलार्इ मध्यम स्कोर दिएको हो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ६२ रन बनाएको थियो।
दिल्लीका लागि रिसव पन्तले सर्वाधिक ३८ रन बनाएका थिए। २६ बल खेलेका पन्तले २ छक्का र ३ चौका प्रहार गरे। यस्तै अन्तिम ओभरमा १९ रन बनाएका हर्षल पट्टेलले १६ बलमा ३६ रन बनाए। यस्तै विजय शंकरले २८ बलमा ३६ रन जोडे।
दिल्लीका ओपनर ब्याट्सम्यान पृथ्वी शःले १७ बलमा १७ रन बनाए। दिल्लीका कप्तान श्रीयस ऐरले १९ रन बनाएका थिए। ग्लेन म्याक्सवेल ५ रनमा आउट भएका थिए। अभिषेकले चार बलमा दुई रन मात्र जोडेका थिए।
Tajakhabartv.com बाट उदृत
शरद भेषावकर छोराका बुबा बने !
महत्वपूर्ण खेलमा रोयल च्यालेन्जर बेङ्ग्लोरको हार ! राजस्थान रोयल्स ३० रनले बिजयी